🥇 ▷ Qorshaha guur-guura: saddexda dalab ee ugu wanaagsan Maajo 1-deeda ✅
Qorshaha guur-guura: saddexda dalab ee ugu wanaagsan Maajo 1-deeda
Haddii xariggu uu socdey inka badan 40 maalmood, xaalada hada waxay noqon kartaa waqti fiican oo aad ku kasbato miisaaniyadaada. Qorshaha guur-guura waa mid aan la iska indhatiri karin oo ka mid ah waxyaabaha kharash-bixinta billaha ah ee si weyn loo hagaajin karo.
Asbuuca dhammaadka bisha Maajo 1deeda, hawlwadeennada La Poste Mobile, RED ee SFR iyo B & YIDHO waxay bixiyaan dalabyo gaar ah iyagoo jebinaya qiimaha dhammaan qorshayaasheeda mobilada. Haddii aad rabto in aad wax ka beddesho diiwaangelinta taleefankaaga oo aad iska tuurto kharashaadkaaga, hadda waa waqtigii la raadin lahaa dhimisyadan oo aan jiri doonin muddo dheer.
La Poste Mobile, oo ah qorshe guur la yaab leh
Haddii ay u muuqato wax aan caadi ahayn in lagu bilaabo xulashadayada qorshayaasha mobilada ee ugu fiican ee La Poste Mobile, waa in la ogaadaa in hawl wadeenku uu soo bandhigay dalab aad u wanaagsan. Iyada oo hadda la xayeysiinayo, macaamiisheeda wareega ayaa noqotay mid ka mid ah qiimayaasha ugu badan ee suuqa… mana jiro qiimaha kaliya oo soo jiidasho leh!
Howl wadeenku wuxuu bilaabay qorshe guur-guura oo ay ka mid yihiin wicitaan aan xadidneyn, SMS iyo MMS iyo sidoo kale 30 GB oo xog guur ah ah 9.99 euro bishii. Shaki kuma jiro in dalabkani uu rafcaan u noqon doono dhammaan kuwa aan dooneynin inay maalgashadaan in ka badan 10 euro bil kasta macaamiishooda, iyagoo ku raaxeysanaya qaddar soo jiidasho leh oo ah GB-ga internetka. Intaa waxa u dheer, qorshahan guur-guura wuxuu leeyahay faa iidooyin la-aan-qasab ahayn, taas oo macnaheedu yahay inaad ka tagi karto La Poste Mobile waqti kasta haddii aad meel kale ka fiican hesho.
Marka lagu daro qiimeheeda hooseeya, qorshaha guurguuraha wadaha ayaa waliba ku siinaya fursad aad kaga faa’ideysato bil bilaash ah oo leh koodhka xayeysiinta “TOUSCONNECTES”. Faa’iidada ayaa cad in la tixgeliyo marka la dooranayo rukumasho cusub. La Poste Mobile, oo ah ‘telefishan’ isgaarsiin telefon ‘ah, ayaa adeegsata kaabayaasha jireed ee SFR, taasoo damaanad qaadeysa tayada shabakadda oo aad u qiimo jaban.
RED by SFR, qorshaha guurka flagship
Haddii aan ku bilownay ka hadalka qorshaha guur-guurta ee loolan ka socda suuqa Faransiiska, waa kan liiska taleefoonnada mid ka mid ah waxyaalaha culus ee waaxdaan: RED by SFR. Dhawr sano gudahood, Faransiisku wuxuu meeleeyay taleefankiisa macaamiisha hoggaamiyeyaasha waaweyn ee suuqa isaga oo uga mahadcelinaya tayada badan oo ka dhigtay mid soo jiidasho leh. Iyada oo leh ama aan lahayn dalabyo qaas ah oo tan oo kale ah, xiriiriyaha ayaa had iyo jeer leh qiime kala-saare ah oo u oggolaanaya inuu isagu kala sooci karo.
Qorshaha moobaylka ee ‘RED’ ee SFR ayaa hada ku jira wicitaan aan xadidneyn, SMS iyo MMS, 60 GB oo xogta guur-guurta ah ee Faransiiska iyo sidoo kale 8 GB oo ah xog guur-guura oo ka socota Midowga Yurub iyo DOMs iyo 100 GB SFR Cloud ayaa loo soo bandhigay 12 Yuuro bishii halkii ay ka noqon lahayd 15 euro. Waxaa kufiican in la sheego in xaddiga xogtu ay tahay mid aad u cajiib badan, adoo og in inta badan isticmaaleyaashu ay aad uga fogaadeen inay wax cunaan bil walba. Hasa yeeshee si kasta oo ay tani u muuqato inaysan ku filnayn, ogow in hawlwadeenka RED ee SFR uu bixiyo ikhtiyaar 100 GB oo internetka ah oo ah 8 euro oo dheeraad ah, oo ku filan inaad aragto ka hor intaadan seegin.
Marka lagu daro qiimaha hooseeya, RED-ka SFR ee qorshaha guur guura wuxuu ka faa iideystaa heerka nolosha la hubo kaasoo ka hor istaagaya qiimaheeda inuu kordho dhowr bilood ama dhawr sano kadib. Marka la soo koobo, xirmadaan rakhiis ah weligeed ma kordheyso waqtiga aad macaamil ka tahay shirkadda Faransiiska. Waxaad bilaabeysaa inaad lacag ka dhigato diiwaangelinta mana u bareereyso inaad mustaqbalka carqaladeyso adigoo si lama filaan ah ugu soo baxay qaan-sheegaddiisa. Ka sokow faa’iidadan soo jiidashada leh, diiwaangelinta taleefanku waa mid aan xirneyn waxayna kuu ogolaaneysaa inaad aado oo aad u aragto meel kale haddii aad ka fiicnaato, dhammaantood adiga oo aan bixin wax kharash dheeraad ah.
Waa tan soo jeedinta RED ee qorshaha guuritaanka ee SFR:
B & DADKA, rukumadaha ugu sareeya
Sida RED sida SFR, B & HADDII waxay awood u yeelatay inay ku soo rogto qorshooyinkeeda mobilada suuq aad u tartan badan oo leh faa’iidooyin badan oo dhammaystiraya qiimaheeda hooseeya. Dhawaan, astaanta kooxda Bouygues Telecom kooxda ayaa xitaa ku dartay dalab 4-aad macaamiisheeda si ay ula jaan qaadaan macaamiisheeda oo dhan. Dhammaan xirmooyinka B & YOU waxay ku jiraan xayeysiin xoog leh dhowr maalmood. Waxaan ogsoonahay in dhammaantood ay yihiin dadaal la’aan.
Waxaa la soo saaray dhowaan, qorshaha ugu hooseeya ee qiimaha jaban ee ka socda B & YADA waxaa ka mid ah wicitaan aan xadidneyn, SMS iyo MMS iyo 100 MB xogta mobiilka ee ah 4,99 euro bishii. Bandhigani wuxuu u fiican yahay kuwa aan ku bixin internetka, laakiin raba inay soo wici karaan oo ay u qoraan saaxiibadood si nabad ah. Dammaanadda labaad ee hawlwadeenka Faransiiska waxaa ka mid ah wicitaan aan xadidneyn, SMS iyo MMS iyo 60 GB oo ah xogta taleefanka gacanta oo ah 11.99 euro bishii. Waqtiga xaadirka ah, waa hadiyadda ugu caansan suuqa, dhammaan hawlwadeennada. Laakiin iska jir, waxay ku egtahay dhowr maalmood.
Qorsha kale ee mobilada ee ‘B & YOU’ sidoo kale waxaa ka mid ah wicitaan aan xadidneyn, SMS iyo MMS, laakiin 75 GB oo ah macluumaadka mobilada oo ah 13.99 euro bishii. Mar labaad, waxay weli ka jaban tahay tiro badan oo xog guur-guura ah. Soosaaraha afaraad iyo kan ugu dambeeya ayaa ah kan ugu dhameystiran, oo ay ka mid yihiin wicitaan aan xadidneyn, SMS iyo MMS iyo sidoo kale 100 GB oo data guur ah ah € 15.99 bishiiba. Kani waa dalabka kaliya ee laga helo suuqa si loogu soo bandhigo tiro badan oo GB ah oo internetka ah qiime aad u hooseeya, marka waa inay rafcaan u muujisaa dhammaan kuwa u baahan macluumaad aad u badan oo loogu talagalay isticmaalka shaqsiyeed ama xirfadle.
Halkan waxaa ah soo koobeynta qorshayaasha guur-guura ee B& YOU: